ဝိုင်ဖိုင်မန်နေဂျာ - WiFi ကွန်ယက်ဆန်းစစ်သူ & မြန်နှုန်းစမ်းသပ် Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » အင်တာနက်က Apps ကပ » Wi-Fi မန်နေဂျာ - Wi-Fi Network ကို Analyzer & မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်း
Wi-Fi မန်နေဂျာ - Wi-Fi Network ကို Analyzer & မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်း APK ကို
Wi-Fi မန်နေဂျာ - Wi-Fi Network ကို Analyzer & Boost & Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်မှုတစ်ခုနေရာလေးကိုနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် Wi-Fi Booster နှင့် Wi-Fi Analyzer ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
Wi-Fi မန်နေဂျာ - Wi-Fi Network ကို Analyzer & Boost & Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်း ထိုကဲ့သို့သော Wi-Fi သူလျှို Detector (ငါ၏အ Wi-Fi ကိုအသုံးပြုပါကဘယ်သူလဲ), Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်း, Wi-Fi Analyzer, Wi-Fi Booster, Wi-Fi Signal Strength မီတာ, Wi-Fi လုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် Wi-Fi Channel ကိုအကဲဖြတ်စသည်တို့ကိုအဖြစ်အသုံးဝင်သော Wi-Fi Tools များဖြစ်ပါသည်
Wi-Fi မန်နေဂျာ - Wi-Fi Network ကို Analyzer & Boost & Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်း အစွမ်းထက် Wi-Fi ကာကွယ်ပေးသူနှင့် Wi-Fi blocker / Wi-Fi သူလျှို blocker ငါ၏အ Wi-Fi ကိုသုံးပါကိုအဘယ်သူထောက်လှမ်းနှင့်ငါ့ Wi-Fi လုံခြုံရေးကာကွယ်ပါရန်ဖြစ်ပါသည်။
Wi-Fi မန်နေဂျာ - Wi-Fi Network ကို Analyzer & Boost & Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်းသော့ချက်အင်္ဂါရပ်များ:
(ငါ့အ Wi-Fi သို့မဟုတ်အဘယ်သူသည်ငါ့အ Wi-Fi ကိုအသုံးပြုပါတွင်အဘယ်သူသည်) ★★ Wi-Fi သူလျှို Detector ★★
Wi-Fi မန်နေဂျာ - Wi-Fi Network ကို Analyzer & Boost & Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်းကိုအလွယ်တကူငါ၏အ Wi-Fi scan နှင့်သင့် Wi-Fi network ကိုချိတ်ဆက်မည်မျှ devices တွေကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သငျသညျ '' သဘောကိုထငျရှား 'သို့မဟုတ်' 'Stranger' 'အဖြစ်အထိမ်းအမှတ်သို့မဟုတ်သင့် Wi-Fi Router ထဲကနေသူတို့ကိုပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။
Wi-Fi မန်နေဂျာ - Wi-Fi Network ကို Analyzer & Boost & Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်းအင်တာနက်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ရန်နှင့်လျင်မြန်စွာတိကျဘရော့ဘန်းမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
Wi-Fi Analyzer ★★★★
Wi-Fi မန်နေဂျာ - Wi-Fi Network ကို Analyzer & Boost & Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်းသငျသညျပတျဝနျးကငျြရှိ Wi-Fi channel များကိုပြသထားတယ်။ သင်သည်သင်၏ကြိုးမဲ့ router ကိုများအတွက်လျော့နည်းလူစည်ကားရုပ်သံလိုင်းကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်။
Wi-Fi မန်နေဂျာ - Wi-Fi Network ကို Analyzer & Boost & Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်းသင်သည် Wi-Fi signal ကိုအစှမျးသတ်တိကိုပြောပြခြင်းနှင့်စုန်း Wi-Fi signal ကို သာ. ကောင်း၏တွေ့နိုင်ပါသည်။
★★ Wi-Fi Booster ★★
Wi-Fi မန်နေဂျာ - Wi-Fi Network ကို Analyzer & Boost & Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအထူးပြု Wi-Fi optimization tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်မှုကိုစစ်ဆေးနှင့်သင့် Wi-Fi Speed ​​ကိုပိုကောင်းအောင်ပါလိမ့်မယ်။
Wi-Fi မန်နေဂျာ - Wi-Fi Network ကို Analyzer & Boost & Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်သင့်လက်ရှိ Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုကိုအချက်ပြအစှမျးသတ်တိ View နှင့်စစ်မှန်သောအချိန်၌သင်တို့လှည့်ပတ် Wi-Fi Signal Strength detect နိုင်ပါတယ်။
Wi-Fi မန်နေဂျာ - Wi-Fi Network ကို Analyzer & Boost & Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်းလျင်မြန်စွာသင်အကောင်းဆုံးတည်နေရာကိုကူညီရှာဖွေပေးရန်သင့် Wi-Fi အစွမ်းသတ္တိကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
Wi-Fi Manager ဖြင့် - Wi-Fi Network ကို Analyzer & Boost & Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်း, သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ admin ရဲ့စာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်နိုင်ပြီးသင့် router setting များကိုပြောင်းလဲမှုများစေ။ Wi-Fi မန်နေဂျာ - Wi-Fi Network ကို Analyzer & Boost & Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်မည်သည့် Router modems (192.168.1.1 သို့မဟုတ် 192.168.0.1 စတာတွေ) ကို Wi-Fi router ကိုစာမျက်နှာဝင်ရောက်ဖို့သငျသညျကူညီပေးသည်။
Wi-Fi မန်နေဂျာ - Wi-Fi Network ကို Analyzer & Boost & Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်းသင်သည်သင်၏ Wi-Fi Router ရဲ့ default အသော့နှင့် passwords ရှာဖွေတွေ့ရှိကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
★★ပို Tools များ★★
• Wi-Fi စာရင်း - သင်တို့ပတ်လည်အားလုံး Wi-Fi ဟော့စပေါ့ကိုပြသ
• Ping - စမ်းသပ်မှုအင်တာနက်မြန်နှုန်း
• Whois - website တစ်ခုနှင့်၎င်း၏ပိုင်ရှင်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့
သင်သည်သင်၏ WiFi ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ Wi-Fi ကိုစီမံခန့်ခွဲသိရန်လိုပါသလား? သင်ရုံ Wi-Fi Manager ကိုဖွင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် - Wi-Fi Network ကို Analyzer & Boost & Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်မှုကြောင့်သင်ကူညီလိမ့်မည်!
- Wi-Fi သူလျှို Detector Add
- Wi-Fi Analyzer Add
- Wi-Fi Booster Add
- Wi-Fi Signal Strength မီတာ Add
- Router Setup ကို Add
- Router Passwords များကို Add
- ပိုဘာသာပြန်စာပေ Add
- ရီးရဲလ်အချိန် Wi-Fi ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Add
Wi-Fi မန်နေဂျာ - Wi-Fi Network ကို Analyzer & မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်း
Wi-Fi Booster - Wi-Fi တိုးချဲ့ & Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်း
Wi-Fi Analyzer - ...
ဝိုင်ဖိုင်စကင်နာ & …
Dr. Wifi: မြန်နှုန်း။